Obama oo khudbad u jeediyay in ka badan 500 oo dhalinyaro Afrikaan ah (Daawo Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Obama oo khudbad u jeediyay in ka badan 500 oo dhalinyaro Afrikaan ah (Daawo Sawirro)
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad u jeediyay in ka badan 500 oo dhalinyaro Afrikaan ah, kuwaasoo ka kala yimid wadamada saxaraha ka hooseeya ee Qaaradda Afrika.
Obama ayaa u sheegay dhalinyaradan in qaarada Afrika ay horumar ka gaartay dagaalka lagula jiro cudurka halista ah ee AIDS, isagoo tilmaamay in malaayiin african ah laga saaray saboolnimo.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dhalinyarada ay horumarka Africa qeyb ka yihiin, isagoo xusay in Africa ay tahay qaarad ay ku nool yihiin dhalinta ugu da’da yar adduunka.
Sidoo kale Obama ayaa ku booriyay dhalinyarada inay sii wadaan horumarka ay qaaradda ku tallaabsatay.
“Rajadeenu waa in 10, 15, ama 20 sano kadib ah, marka aad noqontaan wasiirro ama madax aad markaas isla xiriirtaan, oo aad wax kala barataan, idinkoo caawin doona jiilka soo socda”ayuu yiri Madaxweyne Obama
Dhalinyarada ayaa ka qeybgalayay barnaamijka “YALI” (Hindisaha Hoggaamiyayaasha Da’da yar ee Africa), oo ah barnaamij uu maamulka Obama bilaabay oo lagu taageeraa hoggaamiyayaasha Africa u soo baxaya oo iyagu qeyb ka qaadanaya kororka dhaqaalaha, xoojinta maamulka dimoqraadiyadda, iyo adkeynta qaababka bulshada rayidka ah, kuwaasoo iyagu gacan ka geysan doonta in qaaraddu ay korto oo baraarto.
Madaxweyne Obama ayaa barnaamijka YALI ku dhawaaqay safarkii uu Koofur Africa ku tagay sanadkii 2013, waxaana dhalinyarada ay ka qeyb galeen tababaro lix todobaad socoda oo ay ku qaateen illaa 20-Jaamacadood oo Mareykanka ku yaala.
Waxaa uu sheegay in 80 dhalinyaro Mareykan ah lagu biirin doono barnaamijkan “YALI”, iyagoo sanadka soo socda safaro ku tagi doonaan wadamada Afrika, sidoo kale waxaa uu xusay in illaa 1000 ruux la gaarsiin doono dhalinyarada ka qeyb qaadanaya barnaamijkan.
Barnaamijkan YALI dhalinyarada AFrica ka timid ee ka qeybgalay waxaa ka mid ah dhalinyaro ka timid Soomaaliya, Djibouti, Kenya, gaar ahaa Waqooyi-Bari Kenya iyo Ethiopia.
jeediyay in ka
IMF oo soo dhoweysay go’aankii Golaha Wasiirada Somalia ee dib u eegista Miisaaniyada